Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်)
Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) ကို ဘာအတွက်အသုံးပြုကြသလဲ
Coltramyl® ကို ကြွက်သာ ကျုံ့ခြင်းများအတွက် အများဆုံးအသုံးပြုကြပါတယ်။ ဒီဆေးကို အသက် ၁၅ နှစ်အထက် လူနာတွေမှာ အောက်ဖေါ်ပြပါ ရောဂါတွေမှာ တွေ့ရတဲ့ ကြွက်သာ ကျုံ့ခြင်းကြောင့် နာကျင်မှုတွေကို လျှော့ချဖို့ အသုံးပြုကြပါတယ်။
wryneck, back pain, lumbago အစရှိတဲ့ ကျောရိုးဆစ်ရောဂါများ
အာရုံကြောဆိုင်ရာ (သို့) ထိခိုက်မှုကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ရောဂါများ
ပြန်လည် ထူထောင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ
Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်သလဲ
ဆေးပြားတွေကို ရေတစ်ခွက်နဲ့ မြိုချသင့်ပါတယ်။
Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) ဘယ်လိုသိမ်းဆည်းရမလဲ
Coltramyl® ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Coltramyl® ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ Coltramyl® ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။
Coltramyl® ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Coltramyl® ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) အသုံးမပြုခင် ဘာတွေသိသင့်သလဲ
သင့်မှာ အောက်ဖေါ်ပြပါ အခြေအနေတွေ ရှိရင် ဆရာဝန်ကို ပြောပြထားသင့်ပါတယ်။
တက်ခြင်း (သို့) တက်ဖူးခြင်း
သူ့မှာ သကြားနဲ့ lactose ပါဝင်တာကြောင့် မွေးရာပါ သွေးတွင်း galactose များပြားနေခြင်း ၊ fructose ကို ခံနိုင်ရည် မရှိခြင်း ၊glucose မစုပ်ယူနိုင်သော ပြဿနာစု ၊ lactase sucrose-isomaltase မလုံလောက်ခြင်း စသည့်ပြဿနာတို့မှာ အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေချိန် ဒါမှမဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) ကိုသုံးစွဲဖို့ စိတ်ချရပါသလား
Coltramyl® ဟာ မိခင်နို့ထဲကို စွန့်ထုတ်ပါတယ်။ ဆေးမသောက်သုံးခင် ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်သလဲ
ဓါတ်မတည့်တဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်တဲ့ အကွက်ထခြင်း၊ မျက်နှာဖေါင်းခြင်း၊သွေးလန့်ခြင်း
အရေပြားတုန့်ပြန်မှုတွေ ဖြစ်တဲ့ ယားယံတဲ့ အနီကွက်နဲ့ အဖုလေးတွေနဲ့ အကွက်ထခြင်း
ဝမ်းလျှောခြင်း၊ ဗိုက်နာခြင်း အစရှိတဲ့ အစာခြေမှုဆိုင်ရာ ရောဂါများ
ဘယ်ဆေးတွေက Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Coltramyl® ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ် ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက်တွေနဲ့ အရက်က Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလား
Coltramyl® က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်ရောဂါအခြေအနေတွေက Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်သလဲ
Coltramyl® ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေအတွက် Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
အသက် ၁၅ နှစ်အထက် လူနာများ
ပုံမှန် ဆေးပမာဏကတော့ တစ်နေ့ကို ၄ လုံးဖြစ်ပြီး နှစ်ကြိမ်ခွဲ သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေအတွက် Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) ရဲ့ အသုံးပြုရမယ့်ပမာဏကဘယ်လောက်လဲ
Coltramyl (ကော်လ်ထရာမိုင်) ကိုဘယ်လိုရရှိနိုင်သလဲ
Coltramyl® ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Coltramyl သောက်ဆေးပြား 4mg
Coltramyl® ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။
တည်းဖြတ်သည့်နေ့ ဇွန် 26, 2017 | နောက်ဆုံးတည်းဖြတ်ခြင်း ဇူလိုင် 1, 2017
Coltramyl 4mg. http://healthca.info/2016/05/31/coltramyl-4mg- thiocolchicoside/. Accessed November 1, 2016
COLTRAMYL. http://www.Coltramyl e.com/?c=drug&s=coltramyl&ingredient=thiocolchicoside. Accessed November 1,2016
COLTRAMYL4MG. http://www.ndrugs.com/?s=coltramyl%204%20mg. Accessed November 1, 2016Coltramyl 4mg. http://healthca.info/2016/05/31/coltramyl-4mg- thiocolchicoside/. Accessed November 1, 2016
Charcot Marie Tooth Disease (မျိုးရိုးဗီဇကြောင့်ဖြစ်သော အစွန်အဖျား အာရုံကြောရောဂါ)
ခန္ဓါကိုယ်ရဲ့ အဓိကကြွက်သားအုပ်စုကြီး ၁၁ခု